Ny fampiharana famokarana tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana famokarana tsara indrindra ho an'ny Android
Noho ny fitaovana finday dia tsy vitan'ny hoe mahazo fampahalalana sy fialamboly amin'ny taonina sy taonina amina endrika marobe isika (famakiana, mozika, sarimihetsika, tambajotra sosialy, sns.) Fa manana ihany koa fitaovana eo an-tànantsika izay mamela antsika hamokatra bebe kokoa, izany hoe mahomby kokoa ary mampiasa tsara ny fotoantsika.
Ny hoe mamokatra bebe kokoa dia midika hoe voarindra sy mahomby kokoa, manao asa bebe kokoa hatrany ao anatin'ny fotoana fohy kokoa ary mandany loharano vitsy kokoa ary amin'ny farany, manana fotoana malalaka bebe kokoa amin'ny asa hafa. Miaraka amin'ity tanjona ity, an'arivony maro ny fampiharana ny famokarana (angamba an-tapitrisany maro, mbola tsy nanisa azy ireo aho), nefa tsy isalasalana fa iray amin'ireo sokajy manan-danja indrindra amin'ny Play Store io. Ary anio dia hijery isika ny sasany amin'ireo fampiharana famokarana tsara indrindra ho an'ny Android, fa aza adino fa io dia mifehy tena, ary hiankina amin'ny asanao, ny habetsahanao sy ny haavon'ny andraikitrao ary ny antenainao manokana ...
3 Pushbullet - SMS amin'ny PC
6 Google Drive sy ny namany
Ny iray amin'ireo rindranasa famokarana mahaliana indrindra ho an'ny Android izay ho hitanao ao amin'ny Play Store dia tsy isalasalana fa IFTT. Amin'ny IFTTT dia azonao atao mandeha ho azy asa ary noho izany dia manafoana ny fotoana izay natokanao nanokana ho an'ny asa miverimberina ary ankehitriny dia natokanao amin'ny asa mahomby kokoa. Miorina amin'ny "recette" azonao ampiasaina avy amin'ireo efa natolotra na mamorona anao manokana. Ohatra, mba tsy hohadinoinao ny mamaky ity lahatsoratra ity, azonao atao ny manangona azy amin'ny Pocket ary aseho ho azy ho toy ny asa ao amin'ny boaty Todoist anao izany. Saingy vao manomboka izao IFTT miasa miaraka amina fampiharana 400 mahery ary maimaimpoana tanteraka.
Ary manararaotra ny zava-misy izay efa noresahintsika azy dia afaka milaza isika fa raha te hahomby kokoa dia miorina amin'ny fototra tantano arak'izay azo atao ny fotoana sy ny asanao, ary midika izany hoe mametraka laharam-pahamehana ary mahazo valiny izay mandrisika anao hanao ny tsara hatrany. Ho an'ity, tsy misy tsara noho ny mpitantana ny lahasa Todoist. Miovaova sy miovaova, Todoist dia mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa rehetra, ary saika ny sehatra rehetra, mifangaro amin'ny Google Calendar sy fampiharana be dia be, mahatakatra ny fiteny voajanahary ary manome ny fotoana mety indrindra hanaovana ny asanao aza.
Todoist: Hanao lisitra miaraka amin'ny fampahatsiahivana
Pushbullet - SMS amin'ny PC
Kilasika amin'ny sokajy famokarana: Pushbullet manampy anao hampihena ny elanelana misy eo amin'ny finday avo lenta sy ny solosainao. Izy io dia miasa amin'ny Windows, Mac ary Linux ary karazana fitaratra ireo hafatra sy fampandrenesana azonao amin'ny findainao finday avo lenta izany dia hahafahanao mijery sy mamaly nefa tsy mila miala amin'ny solosaina.
Pushbullet: SMS amin'ny PC sy maro hafa
Trello dia fitaovana noforonina manokana ho an'ny asa fiaraha-miasa izany dia ho fanampiana lehibe ho anao amin'ny tetik'asa manokana sy matihanina. Amin'ny maha "whiteboard virtoaly" azy, ireo tetikasa ireo dia takelaka vita amin'ny lisitra (amin'ny endrika tsanganana) sy ny lahasa, amin'ny endrika karatra ahafahanao misintona sy milatsaka hanara-maso ny fandrosoanao ary hifantoka amin'ny lahasa iray. Azonao atao ny manendry mpikambana, mandefa hevitra, mamorona lisitra ho an'ny lahasa iray, manampy fametahana miaraka amin'ny fampahalalana fanampiny, mifanaraka amin'ny Google Drive sy Dropbox izany ary ny fampiasana azy dia tena tsotra sy intuitive. Na mikasa ny fialan-tsasatra ianao, ny fikarakarana ny bilaoginao, na ny fitantanana tetik'asa famoronana fampiharana revolisionera, Trello no safidy tsara indrindra.
LastPass io dia iray amin'ireo fampiharana mamokatra tsara indrindra ary koa iray amin'ireo fampiharana fiarovana tsara indrindra. Dia a mpitantana teny miafina izay mitahiry ny fahazoanao miditra amin'ny serivisy sy tranokala ka tsy mila tadidinao izy ireo, mamela anao hamorona teny miafina azo antoka kokoa, fidirana haingana kokoa, sns. Raha tsy maintsy miditra amin'ny tranonkala maro isan'andro ianao ary mampiditra anarana sy tenimiafina, miaraka amin'i LastPass hamonjy fotoana sy ezaka be ianao. Izy io dia manana safidy malalaka sy famandrihana premium miaraka amin'ny fidirana amin'ireo fiasa rehetra.
Google Drive sy ny namany
Amin'ity tranga ity dia tsy miresaka rindrambaiko tokana izahay, fa fitaovana iray manontolo izay mora ampiasaina, maimaim-poana ary azo idirana avy amin'ny toerana sy fotoana rehetra mamela anao tahirizo ao anaty rahona ny entanao rehetra, ary koa mamorona, manova, mizara antontan-taratasy, takelaka ary fampisehoana. Ilaina amin'ny mpampiasa Android rehetra any am-piasana, any am-pianarana, ary na amin'ny fiainana andavanandro aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana famokarana tsara indrindra ho an'ny Android
Ny Asus ZenFone AR dia hanomboka amin'ny 14 Jona
Ny OnePlus 5 dia hanana endrika mitovy amin'ny Oppo R11